Fitohizan'ny hafatra : mouah ha ha... ka hotsahotsan'ny nalahatr'i Tealal...
rhaj0 - 13/12/2017 15:04
mouah ha ha... ka hotsahotsan'ny nalahatr'i Tealala @ Frank Rijkaard aho izany kouh..
Voninahitra ho anao sy ny Judaisma ry Tealala aa
tealala - 13/12/2017 15:10
Tianabeloo - 13/12/2017 15:19
Hafahafa mihitsy ka, izay anie ilay nitenenako hoe ntsara lahatra kosa raha noharina @hafa FA izay no tsy maharesy lahatra ahy satria "hafahafa"
tealala - 13/12/2017 15:23
Ka satria nazavaina araky ny tena sens ny ilay izy, fa tsy à la lettre tahaka ny Kristianisma.
Tianabeloo - 13/12/2017 15:27
Io anefa ilay "affirmation" iraisan'ny finona(fivavahana, fiangonana tsy haiko intsony izy ity), mampatonga ahy tsy resy lahatra raha izaho manokana.
Blagy kely tsy maints hataoko @teny garaaso:
"En fait la religion, ce sont des vieux barbus qui cherchent juste à débattre de qui a la plus grosse.......église"
Izay fotsiny, tsy aritro iny
rhaj0 - 13/12/2017 15:30
F'angaha tsy ilay Andmntra na yvhw (IRAY ihany) no "miresaka" aminareo ROAROA rahefa mba mitingitingina "manazava" ny tsi11 aminareo roaroa io??
1- raha IZY no "miresaka" aminareo, dia "hafahafa" ho'a raha SAMY HAFA ny resaka voampita ee..
2- sa, TSISY an'izany "IZY miresaka" izany, fa ny saim-pantatry ny tsi11 aminareo roaroa fotsiny no be famaritra eo io??
Miharena - 16/12/2017 18:18
Maro ireo karazana soratra nampiataina tamin'ny testamenta taloha sy ny vaovao ary ny olona tsirairay izay mampita soratra ao dia samy naneho arak'izay reny tamin'Andriamanitra na tamin'ny Fanahy Masina, na tamin'ny vavan'i Jesoa mivantana na io tamin'IZY mbola niriaria niaraka tamin'ny olona tety an-tany na io IZY efa ao an-danitra.
MIfampitohy ireo teny voambara ao amin'ny boky roa tonta fa ny maha-samihafa ny olona dia misy ny tsy mandalina hatramin'ny farany dia mitompo amin'ny ampaham-boky ary manorina ny finoany ho amin'izany ampahany izany ihany.
Fa io na izany na tsy izany, ny zava-misy dia zava-misy.
endriny - 18/12/2017 06:03
Ka rahoviana aza aho no hita nama? Tena te hitanjaka maty aho izany?
Miharena - 18/12/2017 06:41
Raha ny marina dia misy mijery tsy ankiato anie ny ataon'ny tsirairay fa tsy hoe manao izay ataonao ao ianao dia hiteny hoe tsy misy mahita e!
Izany hoe mitanjaka isika tsirairay avy eo anatrehan'ny manana fahefana hijery ny antsipirihan'ny fiainantsika.
Ny fampianaran'ny Fanahy Masina no ahalalana ny tokony hatao eo anatrehan'izany fitanjahana izany.
Ohatra azo raisina ny momba an'i Kaina namono an'i Abela. Nisy maso nanaraka azy hatrany vao nandika lalana izy.
Raha toa ka tsy manana fitandremana intsony ny olombelona dia manaotao foana ary mivarimbarina any an-davaka hatrany.
Tsy efa hita taratra ve izany ankehitriny ohatra?
Fa soa ihany fa mbola misy famindram-po ahitana olona mitory sy manambara ny marina ary manitsy fa raha tsy izany, olona tsy mahatsiaro tena daholo fa jamba mifampitantana no hita eto ambonin'ny tany.
Miharena - 18/12/2017 07:14
Aleo angamba ireto fijoroana vavolombelona ireto apetraka eto mba hojerenareo aloha ahafantaranareo fa isika anie ka olombelona fanahy e!
rhaj0 - 18/12/2017 15:12
Tena mba tiako fantarina hoe, toatoa ny ahoana ny fi-raisonner-ndry Miharena izany. Hoe, toatoa ny ahoana no hanekeny zava-marina (vérité) iray.
Zava-dehibe io, satria ny "marina ekena" ao no fototry ny fi(s)ainana.
Ny ahy izao, dia démarche scientifique no ataoko raha mbola azoko atao ihany.
1- henoina porofon'ilay lazaina fa "zava-marina". Mifototra @ teoria na hypotheses inona.
2- fantarina ahoana ny methode nahatongavana ho @ io lazaina fa zava-marina io. Ny zava-marina @ siantifika dia efa voaporofo ary voaverina voaeritreritry ny olona hafa, "indépendemment" @ ilay "nilaza" izany t@ voalohany. Ary andramako saintsainiko dia amariniko akoriny azany ilay "zava-marina" raha azoko atao izany.
ohatra tsotra izao dia hoe, hozy HONO ny Baiboly hoe, fotaka+rora dia mahasitrana Jamba.
Dia henoiko iznay ny "porofo". TEna nahiratra izany HONO ilay jamba, hozy HONO ny vavolombelona. Izany dia mifototra @ hoe, "inona no tsy vitan'i Jesosy", ary ireo vavolombelona dia TSy mandainga (na voarebireby). Dia manontani-tena aho hoe, "efa voaverina" ataon'olona hafa indépendemment an'i Jesosy ve izany "fanasitranana" izany? Dia mba hanandrana koa aho izany hoe, hanosotra fotaka+rora ny masoko aho? fa mety ho afaka ihany ity solomaso ity?..
Dia kôpy ianao fa absurde/ridicule daholo izany resa-baiboly izany.. mainka moa fa ity youtube ahiindrahiindran-dry Miharena..
Miharena - 19/12/2017 06:08
Lazaina aminao ary ny foto-pisainana araka ny tena foto-pisainana fa tsy ara-tsiansa.
Ny siansa dia fandinihina zava-misy araka ny efa novelabelarinao io. ZAVAMISY efa eo no dinihina dia anaovana izao teoria hipaotezy rehetra izao hanohanana azy.
Ny foto-pisainana indray dia fitaovana TERAKA isan'andro isan'andro mamaha olana raha misy izany, manamboatra sy mamorona raha ilaina izany. Malleable hoy ny fitenenana io FOTO-PISAINANA io.
Raha tsy misy FANAHY izy io na tafasaraka amin'ny FANAHY FOTOTRA dia manaotao foana, mivenjivenjy etsy sy eroa dia mitsingidingidina sy atopatopan'ny firehana isan-tokony izay teraka eny. Ny olana be eto dia rehefa ampiasain'ny manana foto-pisainana fanjakazakana io fitaovana io dia manimba dia manimba tokoa.
Ny fanazavana ny hoe ny fahotanareo ny efitra mampisaraka AMIKO aminareo dia ampiasain'ny nomena io fitaovana FOTO-PISAINANA io amin'ny fitsipahana ny Mpahary azy ilay izy dia lasa maizina ilay olona na anjely na voary hafa avy amin'Andriamanitra teo.
Fehiny : Hoy Mpitori-teny hoe zava-poana ny zava-drehetra... raha miteny izy hoe zava-drehetra dia io ilay siansa. Zava-poana ihany fa ny tena zavatra dia ny FANAHY FOTOTRA manana ny hasiny sy ny fahefany tsy hita pesimpesenina.
rhaj0 - 19/12/2017 15:36
Miharena Ny foto-pisainana indray dia ... Raha tsy misy FANAHY izy io na tafasaraka amin'ny FANAHY FOTOTRA dia manaotao foana,
oo kaontrera... rahefa asian-dry Miharena ity "imazinasion-pensée-mazika" ity ny resaka folapolahiny sy abilabilany eo io, ka tonga dia ekena tsisy-porofo, tsisy adi-hevitra, dia lasa "resadresa-poana".
Jereo anie ity ohatra ity ee..
Misy paikabe fangolika ao an-dohan-dRabenjamina, ary dia tonga dia, @ maha-kristiana azy, na koa, @ fahaizany ny fomba kristiana nampianarina sy iainany ao, tonga dia nofaritany hoe :
Madagascar aurait enregistré une baisse fulgurante de 20% de son taux de pauvreté, à quatre ans de prise de fonction du Président Hery Rajaonarimampianina. «De 92% à 72%, c’est un exploit économique dû au leadership du chef de l’Etat
Dia avy ry Miiharena-kristiana, dia milaza hoe, io mihintsy Rabenjamina fa VAVOLOMBELONA!!
Dia iza no donendrina sy kaondrana re ry Miharena:
- i Rabenjamina mampinomino foana, mampiresadresa-poana, mampanaonao foana anao, sa
- ianao minomino foana, miresadresa-poana, manaonao foana, sa
- ity système-na finoanareo ity, izay io mitondra amina fomba fi(s)ainana toa io asehonao sy Rabenjamina io
endriny - 20/12/2017 05:18
Eny ho'a: Nilazan'ny zipoko aho hoe: Mitanjaka hono no fahitany ahy.
tealala - 21/12/2017 04:49
Ny ahy izao dia tsy dia miankina amin'ny siansa loatra fa ny zavatra hitako en amin'ny ankapobeiny dia ny olona izay zanaky ny lehilahy iray amin'ny vehivavy efa manambady iray dia hafahafa toetra izay.
"Mamzer"no fiantso azy amin'ny Jodaisma, ao amin'ny jodaisma izy ireo fiarahana voarara @ olom-pady (maromaro izy ao)
Ohatra amin'ireo olona ao anaty baiboly i Amalek.
Miharena - 21/12/2017 08:03
Ny kaondrana aloha dia ireo izay tsy mahalala ny firafitry ny tena amam-panahiny e! na mahay tahaka ny inona aza izy satria mihetsiketsika tsara ny hozadohany rehefa tsy mahalala ny firafiny sy ny endrika fiasan'ny firafitry ny FOTONY dia olom-poana izany.
Ireo ilay olona rehefa tonga amin'ny fodiamandry dia mahita zavatra hafa tanteraka noho ny foto-pisainany dia milaza hoe HAY VE IZAO NO ATY E! TOA EFA REKO TAMIN'NY OLONA SY NY BAIBOLY IHANY IZAO HITAKO IZAO FA TSY NORAHARAHAIKO FA IMAZINASIO NO NITENENAKO AZY.
rhaj0 - 21/12/2017 14:08
tealala ... ny olona izay zanaky ny lehilahy iray amin'ny vehivavy efa manambady iray dia hafahafa toetra izay.
hi hi hi.. mamely ankolaka ary mamely mafy ry Tealala an...
Naninona kosa ho'a tsy tonga dia tsorina fa i Jesosy no "tena izy" ary mba tokony noraisinao ho ohatra ee...
i Maria dia vehivavy efa manambady an'i Josefa. i Jesosy nefa dia zanaky ny ... Andrmntra. Mamzer izany ooo??
ka tantarao eto hoe ry Tealala izany hafahafa toetra izay ao @ Jesosy izany, araka ny fandinihinao azy ao?
Entre-pa, fa fanampiny, ary ity no vao mainka loza beuh.. Ikala Maria ve moa tsy "zanak'Andmntra" koa ee??? Fa tena noterahiNY kosa ho'a...
aiza moa i Jesosy, hozy ry Tealala, no tsy hafahafa toetra izay
tealala - 22/12/2017 05:29
Raha resaka Jesosy dia aleo ireo mpanada-dia azy no anontaninao.
tealala - 08/03/2018 11:32
Misy olona milaza fa mahalala ny tena rain'i Jesosy.